Akụkọ - Mụta nkwakọ ngwaahịa na-adịgide adịgide site na ụdị amaara nke ọma
N'ịbụ ndị mmepe na-adigide na-akwalite, ọtụtụ aha ezinụlọ na ngwa ahịa na-atụgharị uche na nkwakọ ngwaahịa ma na-esetịpụ ihe atụ maka ụdị ndụ niile.
Akụrụngwa enwere ike imegharị + Akụrụngwa Raw dịịrị ya
"N'agbanyeghị otú nkwakọ ngwaahịa ihe ọṅụṅụ siri pụta, ọ gaghị enwe 100% n'efu site na ịdabere na ihe ndị sitere na fosil."- Nke ahụ ọ bụ eziokwu n'ezie?
Tetra Pak weputara nkwakọ ngwaahịa mbụ n'ụwa emere kpamkpam site na ihe ndị a na-emegharị ọhụrụ na 2014. Plastic biomass sitere na shuga okpete na kaadiboodu sitere na ọhịa a na-achịkwa nke ọma na-eme ka nkwakọ ngwaahịa ahụ 100% na-agbanwe agbanwe ma na-adigide n'otu oge ahụ.
Mbelata plastik +Rịgba ígwè
N'ebe a na-emepụta ice cream, ọ bụ ihe a na-apụghị dochie anya ihe mkpuchi rọba?
Na 2019, Solero, akara ice cream nke Unilever nwere, mere mbọ bara uru.Ha wepụrụ iji ihe mkpuchi rọba ma kpochie popsicles ozugbo n'ime katọn ndị nwere PE nwere nkebi.Katọn bụ ma nkwakọ ngwaahịa na ihe nchekwa.
Tụnyere ngwugwu ọdịnala izizi, ejirila 35% belata ojiji plastik nke nkwakọ ngwaahịa Solero a, yana sistemu imegharị ihe mpaghara nwekwara ike ịnakwere katọn nke nwere mkpuchi PE.
Nkwado nkwado ika ọ dị mkpa karịa aha ika?
N'ụlọ ọrụ nri na ihe ọṅụṅụ, enwere ike ịhazigharị ihe eji emegharị plastik ma jiri ya mee ihe, ọ ga-ekwe omume n'ezie?
Na February 2019, nkwakọ ngwaahịa Coca-Cola Sweden gbanwere na mberede.Aha nnukwu aha ngwaahịa mbụ dị na akara ngwaahịa ahụ ka ọ bụrụ otu okwu: "Biko hapụ m ka m megharịa ọzọ."A na-eji plastik emegharịrị arụgharị karama mmanya ndị a.Ụdị ahụ na-agbakwa ndị na-azụ ahịa ume ka ha megharịa karama ihe ọṅụṅụ ọzọ iji mee karama ihe ọṅụṅụ ọhụrụ.
Oge a, asụsụ mmepe na-adigide aghọwo naanị asụsụ nke ika ahụ.
Na Sweden, ọnụ ọgụgụ mweghachi nke karama PET bụ ihe dịka 85%.Mgbe agbachara karama ihe ọṅụṅụ ndị a megharịrị, a na-eme ka ha bụrụ karama ihe ọṅụṅụ maka Coca-Cola, Sprite na Fanta iji jeere ndị na-azụ ahịa ozi n'erighị "plastic ọhụrụ" na ebumnuche Coca-Cola bụ imegharị 100% ma ghara ikwe ka karama PET ọ bụla tụgharịa. banye n'efu.
Ọ bụghị naanị ịzụlite ngwaahịa, kamakwa n'onwe ya na-ekere òkè na imegharị ihe
Ọ bụrụ na mkpọ mmiri ara ehi na-adịghị efu mgbe ejiri ya abanyeghị na usoro ịmegharị ihe, ọ ga-efunahụ ya, na nke ka njọ, ọ ga-aghọ ngwá ọrụ maka ndị ahịa iwu na-akwadoghị na-emepụta ngwaahịa adịgboroja.Nke a abụghị naanị nsogbu gburugburu ebe obibi, kamakwa ihe egwu nchekwa.Gịnị ka anyị kwesịrị ime?
Nestle weputara onwe ya "smart milk powder can recycling machine" n'ime ụlọ ahịa nne na nwa na Beijing n'August 2019, nke na-akụ mkpọ mmiri ara ehi efu n'ime iberibe ígwè n'ihu ndị na-azụ ahịa.Site na ihe ọhụrụ karịrị ngwaahịa ndị a, Nestlé na-abịaru nso n'ebumnobi ya dị oke egwu nke 2025 - iji nweta ihe nkwakọ ngwaahịa 100% enwere ike ịmegharị ma ọ bụ megharia.
FRESH 21™ bụ onye na-emepụta ihe ọhụrụ nke MAP & Skin na-adigidengwọta nkwakọ ngwaahịaemere site na mpempe akwụkwọ - ihe a na-emegharịgharị & nke nwere ike imeghari.Nkwakọ ngwaahịa ọhụrụ 21™na-ekwu maka ọchịchọ nke ndị ahịa maka nkwado na obere rọba ebe a na-enye ogologo ndụ nchekwa maka anụ ọhụrụ, nri edoziri, ihe ọhụrụ na akwụkwọ nri.Emebere ngwugwu kaadiboodu FRESH 21 ™ MAP & SKIN maka nrụpụta arụmọrụ achọtara na rọba - site na iji ihe mkpuchi akpaaka yana ngwa ngwa mmepụta dabara.
Site n'iji FRESH 21™ nkwakọ, ọnụ anyị na-eme mgbanwe na mbara ụwa ma na-anabata akụ na ụba okirikiri.
Ọhụrụ 21™ by Teknụzụ FUTUR.
Mgbe ụdị na-eme nnukwu ọganihu maka ebumnuche mmepe na-adigide, ajụjụ ndị na-arụ ọrụ nkwakọ ngwaahịa kwesịrị iche banyere ya agbanweela site na "ma ọ ga-esochi" gaa na "otu esi eme ihe ozugbo enwere ike".Na nkuzi ndị ahịa bụ akụkụ dị oke mkpa na ya.
Oge nzipu: Mar-18-2022